Huawei ma shaacinin dhibcaha DXOMark ee Mate 20 maxaa yeelay aad ayey u sarreeyeen | Androidsis
Shirkadda Huawei ma aysan shaacinin dhibcaha DXOMark ee Mate 20 maxaa yeelay aad ayey u sarreeyeen
Huawei maanta waxay soo bandhigtay taxanaha Mate 20 loogu talagalay suuqa Shiinaha xaflad ka dhacday Shanghai. Xusuusnow in taxanaha Mate 20 markii ugu horreysay laga bilaabay London dhowr toddobaad ka hor, laakiin hadda waxay ka dhigeysaa kulankeedii ugu horreeyay ee waddanka asalka ah.
In muddo ah hadda, waxay noqotay wax dhaqan ah in dib u eegista DXOMark ee kamaradda nooca astaamaha la sii daayo isla waqtiga taleefanka lagu dhawaaqo. Iyada oo ay taasi jirto, taxanaha Mate 20 wuu ka leexday dhaqankaas, illaa iyo hadda. Shirkadda Huawei ayaa daaha ka rogtay waxa ula kaca ah iyo sababta. Waan kuu balaarinay!
Intii lagu guda jiray daahfurka Shiinaha, Huawei wuxuu shaaca ka qaaday inaysan qorsheyneynin inay sii daayaan dhibcaha DXOMark mid ka mid ah moodooyinka. Tani waa sababta oo ah dhibcaha bartilmaameedka kamaradda DXOMark aad ayey u sarreeyaan. Sida muuqata Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X y Mate 20 Porsche Waxay leeyihiin dejin kamarad awood leh, oo suurtogal ah kan ugu awoodda badan xilligan.
Waxaa cad, Mate 20 Pro waa inuu noqdaa kan ugu awooda badan, oo leh saddex kamaradood oo gadaal ah oo ka kooban 40 megapixel + 20 megapixel + 8 megapixel camera ah oo la dejinayo. Marnaba ma ogaan karno sida ay u sameeyeen dib-u-eegista madaxa bannaan ee DXOMark. Shirkadda Huawei ayaa sheegtay in aysan dooneyn in ay soo jiidato sumcad aan loo baahnaynLaakiin aad ayey macquul u tahay in shirkaddu ay maalin uun daabici doonto dhibcaha oo ah aalad suuqgeyn ah.
Sidaas, sida ay tahay, el Huawei P20 Pro wali wuxuu u taagan yahay taleefanka casriga ah ee ugu sarreeya qiimeynta DXOMark, oo leh dhibco guud 109. Tan waxaa ku xigta Apple-kii ugu dambeeyay ee iPhone XS Max, oo leh 105 dhibcood, iyo Xiaomi Mi Mix 3, oo shalay kulankiisii ​​ugu horreeyay sameeyay walina ku jira kaalinta seddexaad iyadoo leh dhibco dhan 103 dhibcood.
Laakiin nidaamka sawir ee taleefannadan ayaa ka wanaagsan kan Google Pixel 3? Wax walbaa waxay tilmaamayaan haa. In kasta oo qaybtani ay aad iyo aad u shaqayso G weyn, qaabeynta kamaradaha saddex-geesoodka ah ee Huawei sidoo kale waa. Si lama filaan ah, uma badna dhinaca barnaamijka, sida Google ku samaysay, laakiin qeexitaankiisa. Xitaa sidaas, tani waa wax aan dib u xaqiijin doonno. Dhanka kale, waad arki kartaa waxa shirkadda Mareykanku shaaca ka qaaday illaa iyo hadda inay kugu qanciso sawirrada ay labada noocba bixiyaan: Sixir qaadashada sawirada habeenkii bilaa iftiinka leh 'Night Sight' qaabka Google Pixel 3 y Feejignaanta tayada muuqata ee sawirrada sawirrada kooxeed ee lagu qaaday Google Pixel 3.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Shirkadda Huawei ma aysan shaacinin dhibcaha DXOMark ee Mate 20 maxaa yeelay aad ayey u sarreeyeen
Huawei AI Speaker, waa mid ka mid ah HomePod qiimo aad u xiiso badan